Football Khabar » ‘सेभिल्लासँग हिसाबकिताब मिलाउने’ कोम्यानको दाउ : खेलअघि के–के भने ?
‘सेभिल्लासँग हिसाबकिताब मिलाउने’ कोम्यानको दाउ : खेलअघि के–के भने ?
स्पेनिस ला लिगा फुटबल प्रतियोगितामा भोलि (शनिबार) लिगका दुई बलिया टोली बार्सिलोना र सेभिल्ला भिड्दैछन् । सेभिल्लाको घरेलु मैदानमा हुने यो खेल सिजनको दोस्रो लेगको खेल हो । यी दुई टोली केही समयअघि कोपा डेल रे कपको सेमिफाइनलमा सेभिल्लाको घरमा भिडेका थिए, जहाँ बार्सिलोना २–० ले हारेको थियो । सो खेलपछि लगत्तै यी दुई टोली ला लिगामा खेल्न लागेका हुन् । र, यो लिग खेल सकिएपछि केही दिनकै बीचमा यी दुई टोली पुनः कोपा डेल रे कपको सेमिफाइनलको दोस्रो लेगको निर्णायक खेलमा खेल्नेछन् । सो खेल भने बार्सिलोनाको घरेलु मैदानमा हुनेछ, जुन धेरैका लागि प्रतीक्षाको खेल बनेको छ ।
कोपाको फाइनल पुग्न क्याम्प नोउमा दोस्रो लेगको निर्णायक खेल खेल्नुअघि सेभिल्लासँगै लिग खेल्ने खेल्न लागेको बार्सिलोना भने भोलि ठूलै दबाबमा हुनेछ । यसअघि भएको लिगको पहिलो लेगको खेलमा पाहुना टोली सेभिल्लाले बार्सिलोनालाई उसकै घरेलु मैदानमा १–१ को बराबरीमा रोकिदिएको थियो । भोलि यी दूई टोली सेभिल्लाको घरमा दोस्रो लेगको खेल खेल्दा धेरैको नजर यो खेलमाथि हुनेछ । यो खेल सेभिल्ला र बार्सिलोना दुवैका लागि केवल एक खेल मात्रै नभएर, प्रतिष्ठाको खेल पनि हुनेछ । यो खेलमा सबैभन्दा बढी दबाबमा भने बार्सिलोना हुनेछ । ऊ सेभिल्लाको घरमा जाँदा कोपाको सेमिको पहिलो लेगमा भोगेको २–० को हारको बदला लिने दाउमा हुनेछ ।
कोपाको फाइनल जान दोस्रो लेगको निर्णायक खेलमा सेभिल्लालाई आफ्नो घरमा भित्र्याउनुअघि सेभिल्लाकै घरमा लिग खेल खेल्न जानुअघि बार्सिलोनाका प्रशिक्षक रोनाल्ड कोम्यानले सो खेलबारे धारणा राखेका छन् । खेलअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कुरा गर्दै कोम्यानले घुमाउरो पारामा सेभिल्लासँग कोपाको सेमिमा भोेगेको हारको हिसाबकिताब मिलाउने सन्देश दिएका छन् । कोम्यानले सेभिल्लामा खेल्दा बार्सिलोना एक उत्कृष्ट प्रदर्शन र सुन्दर जितको खोजीमा हुने बताएका छन् । त्यत्ति मात्रै हैन, कोम्यानले त कोपाको दोस्रो लेगको निर्णायक खेल खेल्नुअघि सेभिल्लालाई हराएर बार्सिलोनाले दोस्रो लेग खेल्न तयार रहेको कुरा मैदानमा साबित गर्नुपर्ने भन्दै खेलाडीलाई सेभिल्लाविरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि अपिल गरेका छन् ।
‘यो लिग खेल हो । तर, यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण खेल हो । कठिन अवस्थामा लिगको उपाधि होडमा फर्किन हामीलाई यो जित अति नै आवश्यक छ । सेभिल्ला पनि यो खेल जित्न चाहन्छ । बार्सिलोना यतिबेला आलोचना खेपिरहेको छ । लिगको उपाधि प्रतिस्पर्धामा फर्किन हामीलाई टप–४ मा रहेका टिममाथि जित आवश्यक छ । भोलि हुने सेभिल्लासँगको खेल हाम्रा लागि नजिती नहुने खेल हुनेछ,’ कोम्यानले भनेका छन्, ‘यदि हामीले यो खेल जित्न सक्यौं भने उपाधि होडमा हामी उभिनेछौं । यदि यो खेल पनि गुमायौं भने हाम्रा लागि यो धेरै महँगो पर्नेछ । तसर्थ, यो खेलको जित र यसको महत्त्वबारे हामीलाई थाहा छ । यो खेलमा हामीलाई नजित्नका लागि कुनै पनि छुट छैन । हामी यो खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन र सहज नतिजा चाहन्छौं । र, त्यसका लागि लड्नेछौं ।’
कोम्यानले सेभिल्लासँग कोपाको पहिलो लेग हारेपछि दोस्रो लेगको निर्णायक खेल खेल्नुअघि लिग खेल पनि सेभिल्लासँगै खेल्न लागेकाले यो खेल दुवैका लागि दबाबपूर्ण हुने तर बार्सिलोनाका लागि जित ज्यादा जरुरी रहेको कोम्यानले बताए । र, सेभिल्लालाई उसकै घरमा हराएर कोपाको दोस्रो लेगमा कमब्याक गर्न बार्सिलोना तयार छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने उनले बताए । ‘कपको सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा २–० ले हारेपछि दोस्रो लेगको ठीक अघि हामी सेभिल्लासँग नै लिग खेल्न खेल्दैछौं । तसर्थ यो खेल विशेष छ । यदि हामी कपको दोस्रो लेगमा सेभिल्लासँग २–० को नतिजा उल्टाउन तयार छौं भने भोलि ला लिगाको खेलमा सेभिल्लालाई उनीहरूकै घरमा हराउन सक्नुपर्छ । हामीले अझै धेरै कठिन खेलहरू खेल्नुपर्नेछ । तर, भोलिको खेल तीमध्येको एक हो । हामी तयार छौं । मेरा खेलाडी एक उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि तयार छन् ।’
प्रकाशित मिति २६ माघ २०७७, सोमबार २३:१९